#Covid #Nepal Ncov19 – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
Tag: #Covid #Nepal Ncov19
कोभिड–१९ का १८६ नयाँ सङ्क्रमित थपिए, कुल १७ हजार ८४४
अर्थ राजनीति ~ नेपालमा कोभिड–१९ का १८६ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा गरिएको परीक्षणमा १८६ जना नयाँ सङ्क्रमितको पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा चार हजार २१६ नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ […]
कोरोना भाइरस: नेपालमा थप १५६ जना सङ्क्रमित
अर्थ राजनीति ~ नेपालमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का १५६ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा तीन हजार ७४१ जनाको आरटी पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा १५६ बिरामी थपिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ थपिएका बिरामीसँगै नेपालमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या १७ हजार ६५८ पुगेको जनाएको छ । जसमध्ये […]
काठमाडौँमा सातसहित थप ११६ सङ्क्रमित, कुल १७ हजार १७७
अर्थ राजनीतित ~ पछिल्लो २४ घण्टामा ११६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । योसँगै कुल सङ्क्रमित १७ हजार १७७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको हो । नेपालमा अहिले सकृय सङ्क्रमित छ हजार ११४ रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच हजार ९० पीसीआर परीक्षण […]
थप ११६ जना नयाँ सङ्क्रमित , कुल सङ्क्रमित १७ हजार ६१
अर्थ राजनीति ~ नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन् । थपिएका सङ्क्रमितसँगै हालसम्म कोरोनाभाइरसका बिरामी संख्या १७ हजार ६१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा कोरोनाभाइरसबाट ११६ जना नयाँ सङ्क्रमितको पुष्टि भएको जनाएको छ । चौबीस घण्टामा चार हजार ३६१ जनाको कोरोनाभाइरसका परीक्षणका लागि नमूना […]
काठमाडौंमा कोरोनाका कारण तीन जनाको मृत्यु : ज्यान गुमाउनेको संख्या ३८ पुग्यो
अर्थ राजनीति ~ नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार काठमाडौंमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको हो। योसँगै मृतकको संख्या ३८ पुगेको छ। गौतमका अनुसार दुई जनाको ललितपुरस्थित पाटन अस्पताल र एक जनाको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। […]
चौबिस घण्टामा ७० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए, कुल १६ हजार ७१९
अर्थ राजनीति ~ नेपालमा कोरोना भाइरसका ७० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । नयाँ थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोभिड–१९ बिरामीको संख्या १६ हजार ७१९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलन कोभिड–१९ बिरामीको संख्या १६ हजार ७१९ पुगेको जनाएको छ । पछिल्लो चौबिस घण्टामा तीन हजार ६४८ जनामा कोभिड–१९ को परीक्षण गरिएको […]
अर्थ राजनीति ~ हालसम्मको तथ्यांक अनुसार विश्वका एक करोड ११ लाख ८९ हजार ३२५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै, ६२ लाख ९७ हजार १५० जना भने उपचारपछि निको भएका छन् भने विश्वभर पाँच लाख २९ हजार ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिले विश्वकै कोरोना प्रभावित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका भएको छ । अमेरिकामा […]